bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com Green Snake: The Fate of Reunion – Gold Channel Movies
Video Sources 3889 Views Report Error
Apr. 01, 202287 Min.
Green Snake:The Fate of Reunion (2021)
တရုတ်xian xiaရုပ်ရှင်တွေ နှစ်သက်သူတွေအဖို့ မြွေဖြူမြွေစိမ်းဇာတ်လမ်းတွေက စိမ်းသက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြွေကားကြိုက်သူမှန်ရင် series or movies ကြိုက်တာရွေး ကြည့်တိုင်းလည်း အသဲကွဲရတာချည်းပါပဲ(SEတွေချည်းပဲဆိုတော့)။ အခုတစ်ခါမှာတော့ မြွေဖြူမပါဘဲ မြွေစိမ်းသီးသန့်ရုပ်ရှင်လေးဖြစ်တဲ့ Green Snake: The Fate of Reunionလေး တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Reunionဆိုတော့ HEလေးများဖြစ်မလားဆိုတာ ပိစိလေးမျှော်လင့်ကြည့်ကြပါစို့🤣
ကောင်းကင်ဘုံက နတ်သစ်သီးတစ်လုံး ကျိလင်တောင်ပေါ်ကို မတော်တဆပြုတ်ကျလာရင်း မှော်သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါက်လာပါတယ်။ အဲဒီမှော်သစ်ပင်ရဲ့သစ်သီးကနေ တောက်ချင်လို့ခေါ်တဲ့ သစ်ပင်နတ်သားတစ်ပါး မွေးဖွားလာပြီးတော့ မြွေစိမ်းမလေးချင်အာနဲ့ တူနှစ်ကိုယ်ယှဉ်တွဲလို့ နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေကြတာပေါ့။ တစ်နေ့မှာ ချင်အာရဲ့ နတ်ဘုရားစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ မိုးကြိုးစမ်းသပ်ချက်ကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ တောက်ချင်က ချီယွိနတ်သစ်သီးကို ချင်အာကိုယ်ထဲထည့်သွင်းပေးလိုက်တာကြောင့် နတ်မင်းတွေရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကို ခံရပြီး သေမျိုးနယ်မြေမှာ ‌ဆိုးရွားတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ အဖန်တလဲလဲ ပြန်လည်‌မွေးဖွားရင်း ဒဏ်ခတ်ခံနေရတာပေါ့။ ချင်အာကလည်း တောက်ချင်ကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်ပဲ နှစ်ရာပေါင်းများစွာ ကျိလင်တောင်ပေါ်မှာ စောင့်ဆိုင်းနေပေမယ့် တောက်ချင်လူဝင်စားနဲ့ တစ်ခါလေးတောင် တွေ့ခွင့်မရပါဘူး။ တစ်နေ့မှာ တောက်ချင်နဲ့ တစ်ပုံစံတည်းတူတဲ့ တာအိုဆရာလေးချွေ့လန်တစ်ယောက် တားမြစ်နယ်မြေကျိလင်တောင်ကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာပြီး ချင်အာနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါ…
ချွေ့လန်က တကယ်ပဲတောက်ချင်ရဲ့လူဝင်စားဖြစ်မလား။ မြွေမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ချင်အာနဲ့ ငယ်စဉ်က မြွေမိစ္ဆာကြောင့် မိဘတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရ မိဘလိုရိုသေရတဲ့ ဆရာဖြစ်သူကလည်း မြွေမိစ္ဆာကြောင့် ထိခိုက်ထားလို့ မိစ္ဆာကိုအမုန်းကြီးမုန်းပြီး မိစ္ဆာရှင်းလင်းရေးကိုပဲ အလေးထားတဲ့ တာအိုဆရာလေးချွေ့လန်ရဲ့ ဘဝချင်းခြားနေတဲ့ ချစ်ခြင်းက အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်ပါ့မလား။ နှစ်ရာပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရတဲ့ ချင်အာကိုရော ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာပေးလို့ ချစ်ရသူနဲ့ဆုံစည်းခွင့်ရနိုင်မလားဆိုတာကိုသိချင်ရင်တော့ Enjoy the movieပါ😎
Translated by Mary Christ & Egg
Reviewed by Mary Christ
Application ဖြင့်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
App Download Link > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goldchannel.app
Original title 青蛇：前缘
Download Mediafire SD 480p Myanmar 320 MB
Download Mediafire HD 720p Myanmar 760 MB
Download Mediafire FHD 1080p Myanmar 1.8 GB
Download G Drive SD 480p Myanmar 320 MB
Download G Drive HD 720p Myanmar 760 MB
Download G Drive FHD 1080p Myanmar 1.8 GB